Weeraro culus ayaa ku wajahan dekedo ku yaalla Somalia ay ku jirto | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Weeraro culus ayaa ku wajahan dekedo ku yaalla Somalia ay ku jirto
Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM ugu qaabilsan Arrimaha dalka Somalia, Nicholas Kay ayaa sheegay inay Ciiddanka AMISOM iyo kuwa Dowladda Federalka isku diyaarinayaan weerar cusub oo ay ku qaadaan Dekeddaha ay Dagaalyahannadda Alshabaab maamulaan, si ay u soo af-meeraan Ganacsiga Dhuxusha ee Alshabaab ka dhoofiyaan Dekeddahaasi.
Nicholas Kay oo Wakaalladda Wararka ee AFP ugu waramayey magaalladda Nairobi ayaa tilmamaay inay Dekedda magaalladda Baraawe tahay goobaha tiradda yare e ay Alshabaab maamulaan, wuxuuna xusay in Hawlgalka AMISOM iyo ciiddanka Dowladda looga dan leeyahay si Alshabaab looga hor-istaago Malaayiinta Dollar ee ay ka helaan Ganacsiga Dhuxusha loo iibiyo dalalka Gacanka Carabta.
“Alshabaab waxay Dhoofinta Dhuxusha sannadkiiba ka helaan ugu yaraan 25 million oo Dollar” ayuu yiri Nicholas Kay.
Waxa uu ku eedeeyey Alshabaab inay khatar ku yihiin Ammaanka iyo Dib-u-dhiska Dowladnimo ee Somalia.
Dhinaca kale, ilo dhinaca Ammaanka ayaa sheegay in Hawlgalka CiiddankaAMISOMi yo kuwa Dowladda lagu wado inay bilowga bisha so osocota ee September u ruqaansadaan magaallooyinka Dekeddaha leh ee ay Xarakadda Alshabaab kaga sugan yihiin Koonfurta Somalia.